Wanya bɔne fafire? ɛbɛyɛ dɛn na Nyankopɔn de me bɔne nyinaa akyɛ me?
Asɛmbisa: Wanya bɔne fafire? ɛbɛyɛ dɛn na Nyankopɔn de me bɔne nyinaa akyɛ me?
Mmuaeɛ: Asamafoɔ nnwuma 13:38 sɛ; ‘Enti anuanom, monhunu sɛ ɛnam oyi so na wɔka bɔne fafirie kyerɛ mo.’
Aane sei ara na ɛteɛ! Wontumi ntua wobɔne so ka. Nanso wonam gyidie ne Onyankopɔn adom ne ne mmɔborohunu so bɛtumi anya no kwa. Sɛ wopɛ sɛ wofa Yesu sɛ wo kra agyenkwa na wonya bɔnefafirie firi Nyankopɔn nkyɛn a bɔ saa mpaeɛ yi. Kae sɛ, worebɔ saa mpaeɛ yi anaa foforɔ bi ntumi nnye wo nkwa. Kristo mu gyedie nko ara na ɛtumi mma nnipa bɔnefafirie. Saa mpaeɛ yi yɛ ɔkwan a wonam Nyankopɔn mu gyedie a wowɔ de reda no ase sɛ bɔnefafarie ho akwannya wɔ hɔ. ‘Awurade Nyankopɔn, menim sɛ mayɛ bɔne atia wo a anka asotwe na ɛsɛ me. Nanso megye di sɛ Yesu Kristo atua m’asotwe so ka na menam ne mu gyidie so bɛnya bɔne fafirie. Mede me ho to wo nkwagyeɛ no so. Meda wo ase wɔ w’adom ne bɔnefafirie sonowonko a me nsa aka yi nti, Amen!’